Fence Fekitori | China Fence Vagadziri, Vatengesi
3D mesh fenzi inoratidzirwa yakatsindirwa yakatetepa "V" yakavezwa matanda, mune iyo yakatwasuka waya yakatambanudza iyo upamhi hwese hwepaneru iyo inogona kupa akawedzera simba uye kuomarara. Semhando yakasarudzika yematare waya, 3D welded waya fenzi pani inoitwa kubva kwakakurudzira kabhoni simbi kana simbi waya zvakanyanya, iyo yakakomberedzwa kuita yakakodzera "V" kona uye ndokusunganidzwa mupaneru.
Simbi fenzi yezvinhu inopisa yakanyorova kwakakurudzira simbi chubhu, iyo yekurapa poda yakaputirwa.
Tubular simbi fenzi mapaneru inozivikanwa kwazvo muindasitiri, Zvekutengesa uye zvakakwirira nzvimbo.
Mavara akasiyana siyana anoita kuti iratidzike senge ine hushamwari, ine zvese hunhu hunodiwa kuti vachengetedze kunze. Mhando dzakasiyana dziripo.
Broadfence's Anticlimb Standard Fence Panel yakasimba uye yakasimba, asi isina kureruka uye nyore kuisa. Aya ma11 '4 "akareba uye 6' 7" akakwirira mafenzi mapaneru akakwana kune akakura masayiti ekuvakisa, anovhara njodzi, konzati uye mutambo wevanhu kudzora, zviitiko zvenguva, kutonga kwezvakatipoteredza uye mukuru mugwagwa uye mabasa eruzhinji.